Uphando olutshanje lwazinzulu luye lwaqinisekisa ukuba utywala obuncitshisiweyo luncedo kakhulu kumzimba nangengqondo kunokuba uzigwebe ngokuqinileyo. Ngokukodwa xa ulandela utshintsho olutsha kwezobugcisa bebartenders kwaye wenze "i-cocktail ye-organic food" kunye nemifuno, iziqhamo kunye nemifuno. Indlela yokupheka "i-cocktail" ifikile evela eYurophu.
Iziphuzo ezinjalo zibhekwa nje ukuba zinobuhlobo bendalo kwaye ziphilile, kodwa zineentlobo ezikhethekileyo. Ukuba khona kotywala kukhuthaza izakhiwo ze-antioxidant yeefuno nezityalo, ukwandisa amandla abo okucima igazi kwi-radicals yamahhala kunye nokucotha ukuguga. Ngokuqinisekileyo, akukho nondlo-nondlo uza kukucebisa ukuba udle ubuninzi bokusetyenziswa kotywala ngosuku. Kodwa isizukulwana esitsha sabantu abahamba ngeebhanti kunye ne-sommeliers benza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba le gilasi yindawo efanelekileyo kakhulu kunye neyona nto enokuyidla yonke into owake wazama. Ukwahlulelwa kweenkwenkwezi kunye neendlela zokulungiselela zonke zikwinqaku lethu. Ukulungiselela ii-cocktails eziphilayo zasebenzisa ezininzi izithako:
■ Imifuno - utamatisi, izaqathi, ikhukhamba, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, ithanga, ipropper enothambileyo, i-pepper, i-beetroot.
■ Iziqhamo - nayiphi na, ngokusekelwe kwizinto ozikhethayo.
■ Iitrob - rosemary, thyme, basil, tarragon.
■ Iziqholo - i-clove, i-sinamoni, i-cardamom, i-vanilla, i-baden, ipolisi emnyama, ipompi emhlophe.
Ezi zithako zidibene kunye nazo zonke iindidi zotywala, zithandwa kakhulu kwilizwe apho, apho
Mojito nge-blueberries kunye ne-lavender
• Amaqabunga ama-10-15 e-mint
• 30 ml ye-lavender isiraphu
• I-1/2 i-juice yelisi okanye ijusi lemon
• 15-20 i-berberry berries
• 40 ml ye-rum emhlophe
• Amanzi amaminerali atshabalalayo
Kule ndawo yokutya izodinga isilaphu ye-lavender - thatha i-1 ingilazi yamanzi, i-0.5 iikomityi zeshukela, iingu-0.25 iikomityi zeentyantyambo ze-lavender zomile, zizise kwimilenze uze udibanise imizuzu eyi-10, ngoko ugalela, uthele kwi-container engenakunqanda kunye nefriji . Kwiglasi elide, xuba amaqabunga amhlophe, isiraphu ye-lavender, i-berberryberry berries, i-lemon okanye i-juice ijusi kunye ne-rum. Ngolu hlobo lulandelayo, xuba ukudibanisa yonke into enokuyithandayo, kodwa ungayithandi (ukuba kuyimfuneko, gxina i-cocktail). Gcwalisa ingilazi ngeqhekeza eliqhekezayo kwaye uthele amanzi e-soda ngaphezulu. Khonza nge-straw.
Intlangano ephumelelayo - imifuno
Ijusi yamatamatisi yinto eyona nto "yokudala" yemifuno yokuvelisa i-cocktail. Ihlanganiswe ngokuthe ngqo kunye nezinye iifuno (ikhukhamba, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi), kunye nezoninzi ezininzi (isardard, horseradish, wasabi, pepper, ityuwa) kunye namasiki (iTasco, Worcestershire, soy). Iikotyi zixhamla ngokukhethekileyo. I-trio yekhukhamba - utamatato - isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi idibanisa kwisinambitheko esincinci kakhulu. Iikaroti zenza ibini elihle kakhulu kunye nesinamoni. I-sweet taste of carrots idibanisa ngokugqithiseleyo utywala kunye neenkcukacha ezibuhlungu. I-Beetroot SOK inikeza i-cocktails umbala ovuyoleyo, ukunambitha kwayo okucacileyo kuyahamba kakuhle nge-vodka. I-sweet pepper yenza inhlanganisela emangalisayo kunye nama-strawberries. Kwaye oku, mhlawumbi, yiyona nto ingalindelekanga kuyo yonke ingentla. Iitrobhu kunye neziqholo zidibanisa neziqhamo zinika iziqholo kunye nephunga elikhethekileyo kwiziphuzo. Xa uzama, awuyi kudideka nantoni na. Ezi zidibeneyo zilandelayo zilungile kakhulu:
■ Iziqhamo ze-Thyme
■ Basil - strawberry
Ubuncwane - Iziqwenga
■ I-banana - isinamoni
• 20 ml ye-liqueur yase-orange
• 30 ml isanqante esitsha
• I-20 ml yejusi ye-orange
• 15 ml yobusi
• i-pinch yesinamoni yomhlaba
Beka zonke izithako kwi-shaker udibanise. Unxinxantye kwi-sled chilled kwi-cube ice kunye nokuhlobisa ngesicande se-orange kunye ne-pinch ye-sinamon. I-Coniferous shades ye-rosemary yinto enobusi kunye notywala kunye nezinto ezithandayo. Inyosi yenza enye inempilo kwishukela kwaye idibanisa ngokugqithiseleyo neRum, ngakumbi xa ithukuthele. Ijomegranate ijusi inikeza umbala kunye nentlawuzo eqabulayo kwii-cocktails eKosmoliten naseMartini.
• ijusi ye-3 limes
• 2 tsp. ushukela omdaka
• i-pinch of ginger yomhlaba
• 40 ml ye-tequila yokukhanya (yesilivere)
• 15 ml ye-mescal
• 30 ml umxube we-lemon
• Iqabunga eli-1 le-beet lokuhlobisa
Umxube we-i-sugar-sugar is ayenzileyo ngaphambili. 1 ingilazi yamanzi ashisayo kunye ne-1 ingilazi yeswekile kunye neziglasi ezi-2 ze-lemon juice (malunga ne-8 lemimu). Ipholile kwisitya esingenakunqanda esilaphayo esinesiqhekeza. Kwiqhosha elincinci lidibanisa i-beetroot, i-juice, i-lame, i-sugar, i-sugar, kunye ne-ginger. Khupha uze ushiye ukumamitha malunga nemizuzu eyi-10 de i-beet ithambile. Amaxesha amaninzi ukukhusela umxube ekutshiseni. Susa ama-beet uze uvumele utywala olusele luzopholisa. Kwi-shaker, faka i-tequila, i-mescal, i-40 ml ye-beet-infusion ecolile kunye ne-sugar-lemon mix. Yongeza i-ice, udibanise kakuhle. Gxininisa kwiglasi ukuze udibanise, ugcobe ngekhasi le-beet.
■ 40 ml ye vermouth eyomileyo
• 20 ml yobunxilisayo bokusela
• 15 ml ye juyi yelisi
• 15 ml iswekile
Beka zonke izithako kwi-shaker udibanise. Ukunyamezela eklasini egumbini ye-cocktail kwaye uyihlobise nge-curly spiral evela e-feijoa.
• Iingcezu ezimbini zekhukhamba
• amahlamvu angama-10
• I-20 ml ye juyi yelisi
• naluphi na utywala
Beka zonke izithako kwi-shaker udibanise. Ukunyamezela kwisilingi esikhuphekileyo, phezulu phezulu kwisoda. Gcoba ngengcezu yekhukhamba.
• 50 ml ye vodka
• I-200 ml yejisi yetamatato
• I-20 ml ye juisi
• ii-2 zeetyhula zesitroliya
• isabi (ukunambitha)
• 15 ml we-sau sauce
Beka zonke izithako kwi-shaker udibanise. Dlulela kwiglasi elalikhutshiwe, uhlobise ngetye lekhukhamba.
• 50 ml ye-vodka (okanye nayiphi na i-alcohol base)
• Iikomityi ezimbini zekhukhamba
• i-basbasco i-sauce (obomvu kunye nohlaza)
• I-sauce yeWorchester
Hlanganisa zonke izithako kwi-shaker, uthele kwidiza egayiweyo, ugcobe ngekg yekhukhamba.
• 40 ml yeerharnate ijusi
• 30 ml ye vodka
• 15 ml umlingo we-lemon
• 15 ml yemitha yamango
• 15 ml ye-campari
• ii cubes
• Amanzi amaminerali e-soda
• Iikomityi ezimbini zekhukhamba yokuhlobisa
• ukujikeleza kwekhasi lemon
Dlulela kwi-shaker ene-ice cream (okanye nayiphi na isitya esinesiqhekeza) ijusi legromegranate, i-vodka, ijusi yamanoni, i-mango nectar, i-campari, i-cointre. Ngolu hlobo lulandelayo, gungqa imizuzwana engama-30, ngoko unxilise uphuze uze utshelele kwiglasi egcwele iikhabhi ze-ice. Ngaphezulu, hlwaza amanzi e-soda, uhlobise ngekhukhamba kunye nemon.
Iindlela zokupheka ezona zidliwayo zetafile
Isiqhamo: imbiliso, ibhasikidi, isanti ...
Ngaba uyaqiniseka ukuba iqabane lakho alikusebenzisi, kodwa likuthanda? Hlola ...
Ukunyanzeliswa kwabantwana abasesikolweni
Indlela yokwenza i-gradient manicure
Ipopkin pie ngaphandle kokubhaka
Umphathi omtsha weprojekthi
UAndrey Jedzhula nomkakhe umculi uSanta
Ikhalenda yokukhulelwa: iiveki ezingama-20
I-Syphilis kubasetyhini: iimpawu, ingozi, unyango